कोही भोकै नमरुन् !
स्विट्जरल्यान्डकाे पहिलो जितमा शाकिरीको दुई गोल
इटालीसँग पराजित भएपनि वेल्स नकआउट चरणमा प्रवेश
स्वच्छ छविका मानिएका ८० वर्षीय नेताले मेरो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरे : बाबुराम भट्टराई
मेलमिलाप सम्बन्धी सिङ्गापुर महासन्धी अनुमोदन गर्न सरकारलाई सुझाव
नेपाल टेलिकमको आईपी टिभी भैरहवामा पनि विस्तार
कर्णालीका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वाेच्चकाे आदेशविरुद्ध ओलीको भ्याकेट निवेदन
सेती नदीमा दिउँसै भेटिएको शव अझै निकाल्न सकिएन
दाङमा कोरोना संक्रमण घट्दै, सक्रिय संक्रमितको संख्या ३०७ मा झर्‍याे
सुबिसु र नोकियाको सहकायर्मा अप्टिकल नेटवर्क अत्याधुनिकरण
प्रदेश १ मा २५५ कोरोना संक्रमित थपिए
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्पादकीय कोही भोकै नमरुन् ! अब कहिल्यै पनि मलर सदा वा सूर्यबहादुर तामाङको नियति नदोहोरियोस्
बाह्रखरी - बुधबार, वैशाख १५, २०७८
जनतालाई महामारीबाट 'जोगाउनु अपनाइएका उपायका कारण कोही भोकभोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु हुँदैन भन्ने विषय सबै तहका सरकार, मानवीय सहायतामा संलग्न व्यक्ति र संस्था तथा सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म परेको देखिएन ।
हिँडडुल गर्न पनि नपाउने गरी निषेध गरिएपछि दिनहुँ निबेक गरेर छाक टार्नेहरू अब कति दिन भोकै बस्नुपर्ने हो रु दिनहुँ कमाएर गुजारासम्म चलाउनेसँग बचत त यसै पनि हुँदैन । तिनलाई कसैले सहायता नदिए भोकैले ज्यान लिन्छ ।
पोहोर बन्दाबन्दीका बेला खान नपाएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङहरू यसैका उदाहरण हुन् । यद्यपि, राज्यको ढुकुटीबाट भने मानवीय सहायता वितरणकै लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको विवरण दिइएको थियो ।
विडम्बना, निषेधाज्ञा जारी गर्ने गराउने कसैले पनि फेरि भोकै मर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्ने सोचेको देखिएन । सरकारले बेवास्ता गरेकैले अहिलेसम्म राज्य वा अरू संस्थाले दिनहुँ काम नगरे गुजारै नचल्नेहरूका लागि प्राण धान्न आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने तत्परता नदेखाएका हुन् कि ?
मानवीय सहायताविना प्राण धान्न नसक्ने अवस्थामा हुनेहरू प्रायः निमुखा र पहुँचहीन हुन्छन् । तीमध्ये कतिपय त हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा हुनेहरूलाई शासक वा अरूले बेवास्ता गरे पनि रेडक्रसजस्ता मानवतामा समर्पित संस्थाले हेरविचार गर्ने प्रचलन थियो ।
नेपालमा भने रेडक्रसले समेत मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने काम बिर्सेजस्तो छ । दलगत भागबन्डाका आधारमा सरकारले नियुक्त गरेका जागिरे पदाधिकारीले रेडक्रसको आदर्श र स्वयंसेवीको समर्पण नदेखाउनु सायद आश्चर्यको विषय पनि होइन ।
यद्यपि, रेडक्रस नेतृत्वले कर्तव्य बिर्से पनि कर्मचारी र स्वयंसेवक त संवेदनशील हुनुपर्ने थियो ।
अन्नकै अभाव हुनसक्ने दुर्गम गाउँहरू र भावनाकोसमेत अनिकाल पर्ने सहरहरूमा मानवीय सहायताको खाँचो बढी हुन्छ । काम नपाउनेबित्तिकै भोकै पर्नेहरू सहरका चिसा छिँडीमा अन्नपानी नपाएर छटपटाएको कसैले थाहै नपाउने अवस्था पनि हुन्छ ।
निषेधाज्ञा कतिन्जेल लगाइन्छ सायद कसैलाई पनि थाहा छैन । यसैले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल सरकारले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य तत्काल गरोस् । जनताको जीवन रक्षा सरकारको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो ।
जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काममा सरकारी कर्मचारीले प्रायः अल्झो झिक्छन् । भूकम्प वा पोहोरको अनुभव ताजै छ । गम्भीर अवस्थाको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न कर छुट दिने निर्णय कर्मचारीले अल्झाउँदा अब सहुलियत कामै नलाग्ने हुनपुगेछ । यसैले राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता लिनसपर्छ । कम्तीमा यति एउटा पुण्यको काम त गर १
बुधबार, वैशाख १५, २०७८ मा प्रकाशित
#भोकै मर्ने नियति
सार्वजनिक यातायात सेवा बचाऊ !
निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा नयाँ निर्णय लिँदा सरकारले सारवजनिक यातायात जोगाउन विशेष प्राथमिकता दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । ११ घण्टा पहिले
नेपालको संविधान, २०७२ जीवित रहँदासम्म न्यायिक परीक्षण नहुने अर्थात् निरङ्कुश हुकुमी शासन चलाउने चाहना पूरा हुनसक्तैन । शनिबार, असार ५, २०७८
राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी सम्झने बेला
प्रधानमन्त्री ओलीलाई त यसै पनि संघीय, समावेशी, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र कहिल्यै मन परेको थिएन । यसैले उनी कोभिड-१९ को महामारीमा पनि... बिहीबार, असार ३, २०७८
नदीका बगर र कलिला पहाड खोस्रेर निम्त्याइएको बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्ति आगामी वर्षहरूमा झन् बढ्ने निश्चितै छ । बुधबार, असार २, २०७८
खोप हराएका बूढापाका
ज्येष्ठ नागरिकमा पनि ८० काटेकालाई दिने कि ७० माथिकालाई पनि पुग्छ रु बाँकी खोप कहाँ कति छ हिसाब गरेर सरकारले... मंगलबार, असार १, २०७८
सरकारबाटै खतरा !
सरकारी निकायका पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि नागरिकहरूले सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने अवस्था दुनियाँका अरू मुलुकमा बिरलै देखिएको छ । सोमबार, जेठ ३१, २०७८
रुन्चे प्रधानमन्त्रीको सुधार योजना
‘बाढी पहिरो क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर काम गरिरहेका छौँ’
यहाँभन्दा भत्कन बाँकी के छ ? धुलो टक्टक्याऊँ, पार्टी उठाऊँ मंगलबार, असार १, २०७८
ब्राजिलमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख नाघ्यो १५ घण्टा पहिले
रुसमा जहाज दुर्घटनामा नौजनाको मृत्यु शनिबार, असार ५, २०७८
माइक्रोसफ्टको अध्यक्षमा भारतीय मूलका सत्या नाडेला नियुक्त शनिबार, असार ५, २०७८
महेश आचार्यले प्रश्न उठाएपछि बैठकमै आक्रोशित भए देउवा
काठमाडौं उपत्यकामा अझै एक सातादेखि १० दिनसम्म निषेधाज्ञा थप्ने तयारी